N'ogbe Soft green turf maka odida obodo 25mm Manufacturer and Supplier | Jieyuanda
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ obodo tinyere mmepe nke akụ na ụba, na-etinye oke ndụ obibi ndụ ndụ, usoro ndụ obodo bụ ọsọ ọsọ, gburugburu ebe obibi maka ọhụụ ọhụụ ugbu a, na-ebelata nrụgide ahụ, ahịhịa ahụ ga-adị oke mkpa iji mee ka ihe gbasara gburugburu mma. greening na campus greening apụghị ịhapụ ịchọ mma nke ahịhịa, ahịhịa dị ka otu n'ime ndị kasị ewu ewu na-acha akwụkwọ ndụ ahịhịa ugbu a. Kedu ihe kpatara ahịhịa artificial ji ewu ewu karịa ahịhịa nkịtị?
Nke mbụ, ụgwọ dị ala. Ihe kachasị mkpa nke ahịhịa na-ewu ewu karịa turf bụ obere ego ya, nke gụnyere (ụgwọ njem, ụgwọ ntanye, ụgwọ uto, ụgwọ ọrụ, wdg). Ọnụ ego kachasị elu nke ahịhịa eburu bụ nlekọta post. Eringgba mmiri, inye nri ala, ịkpụchasị, na igbu ụmụ ahụhụ dị oke. Artificial na-azọpụta akụkụ a nke ụgwọ. Ahịhịa wuru ka dị mfe kpuchie na ọ dịghị mkpa ka a kụọ ya dị ka ahịhịa nkịtị, yabụ ana echekwa ụgwọ ọrụ.
Nke abuo, ihu igwe emetụtaghi. Ọnọdụ ihu igwe anaghị emetụta ahịhịa artificial, ọ bụ otu n'ime ihe ndị na-ewu ewu karịa ahịhịa nkịtị. Karịsịa n'obodo ụfọdụ dị n'ebe ugwu mba m, n'ihi mmetụta nke ihu igwe siri ike, ahịhịa sitere n'okike na-anwụ n'oge oyi ma ọ bụ na nnukwu snow na-ekpuchi ma na-anwụ. N’ebe ọtụtụ afọ ụkọ mmiri ozuzo dị, ahịhịa sitere n'okike na-esi ike itolite ma lekọta ya, ahịhịa wuru aghọọla nhọrọ ha kachasị mma maka ịkọ ahịhịa mepere emepe.
Nke atọ, mmezi dị mfe. Ngwunye abrasion nke ahịhịa artificial dị mfe. Ọ chọghị ọrụ mmezi dị ka ahịhịa nkịtị. Ọzọkwa, ahịhịa anụ ahụ nwere ezigbo mmiri na-adịgide adịgide ma nwee ike iji mmiri saa ya ma ọ bụrụ na uzuzu dị. Ahịhịa artificial nwere oke njupụta, ezi kwụ ọtọ, ikuku na mmiri ozuzo anaghị emetụta ya. , Nchedo gburugburu ebe obibi.
Nke anọ, mmetụta a na-ahụ anya ka mma. Site na mmelite na-aga n'ihu nke teknụzụ na-emepụta ahịhịa, a na-eme ka ahịhịa na-eme nke ọma nke ọma. N'ihe anya, njupụta nke ahịhịa artificial dị elu, ya mere ụcha nwere mmetụta dị egwu karịa ahịhịa nkịtị. Unique aka technology, ahihia silk bụ nnọọ ezigbo, adụ na ala, na-enye ndị mmadụ a ezigbo kọntaktị ahụmahụ.
Anyị na-enye ahịhịa dị iche iche ahịhịa emere nke ọma maka etinyere ala na ihe ndị ọzọ eji eme ihe dịka ụlọ oriri na ọ /ụ /ụ / ụlọ nri / mbara ihu / anụ ụlọ na-egwuri egwu / ụmụaka na-egwu mpaghara / yabụ kapeeti.
Ahịhịa ndụ nke oge a dị ka ahịhịa nkịtị! Anwụrụ wuru wuru bụ nchekwa nchekwa maka ọtụtụ afọ. E wezụga nke a, ọ nwere ọtụtụ elele, gụnyere envionmental nchedo ihe / adụ aka mmetụta / ebube na-agbanwe / mgbochi UV na ezi agba njigide na mfe ọcha na ọtụtụ-eji na ime ụlọ na n'èzí.
Ifuru Ji achọ Ogige
Ru ala ahịhịa
Wuru turf maka odida obodo
Ru ala maka ala